Sakana goavana amin’ny fihariana : ahitana karazan-dalana ratsy avokoa ny faritra rehetra | NewsMada
Sakana goavana amin’ny fihariana : ahitana karazan-dalana ratsy avokoa ny faritra rehetra
Mbola manahirana ary tena sakana goavana eo amin’ny asa fihariana maro eto Madagasikara ny faharatsian-dalana. Ahitana olana ireo lalam-pirenena rehetra, mampifandray ny faritra na ireo anatin’ny faritra. Miankina betsaka amin’ny any ivelany ny famatsiam-bola fanamboarana ireo lalana ireo.
Ratsy ny lalana avy eto an-dRenivohitra mankany amin’ireo faritra malaza amin’ny fizahantany na tsy tokony ho lavitra sy andaniam-bola sy fotoana firy aza izany. Efa singa iray mampiveren-dalana izany sy mahalafo ny saram-pitaterana izay. Amin’ny ankapobeny, tsy afa-mandeha mihoatra ny 30 na 40 km isan’ora ny fiara. Singa iray hafa sakana ho an’ny mpampiasa vola ihany koa.
Raha mbola te hiditra lavidavitra any amin’ny faritra ny mpandeha na ny mpitatitra, voatery miditra amin’ny lalan-dratsy avokoa, tsy ahavitana raha tsy 10 na 15 km isan’ora. Mbola mampitombo avo roa heny amin’ny fotoana lany ireo lalam-pasika na feno fotoka mandritra ny fotoam-pahavaratra. Matetika tsy azo ihodivirana ny fahasimban’ny fiara eny an-dalana, koa tsy maintsy miomana amin’izany ny rehetra, na ny mpitatitra na ny mpandeha. Mazava loatra, mampitombo ny vola lany izany rehetra izany.
Ahitana karazan-dalana avokoa ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Amin’ny faritra sasany aza, mandavan-taona izay faharatsian-dalana izay; any amin’ny hafa kosa misokatra mandritra ny volana vitsy monja; ary tsy azo aleha mihitsy any amin’ny distrika maro hafa noho ny lalan-dratsy miampy ny asan-dahalo. Ampolo taona maro no nisian’ireo lalan-dratsy ireo.
Santionany amin’ny lalan-dratsy
Santionany amin’ny lalan-dratsy : raha ny any avaratra, malaza ratsy hatry ny ela, Ambilobe-Vohémar, 164 km, tsy latsaky ny 12 ora ny anaovana izany. Ety amin’ny faritra afovoany, Antananarivo-Ambatondrazaka, 266 km, atao 11 ora raha haingana indrindra ; any atsinanana, Toamasina-Maroantsetra, 402 km, tsy latsaky 15 ora; any atsimo, Ampanihy –Ambovombe, 224 km, 8 ora ; any andrefana, Tsiroanomandidy-Maintirano, 934 km, lalana atao telo andro.
Tsara ny lalana amin’ny ankapobeny raha ny avy eto an-dRenivohitra mankany Mahajanga (RN4), Toamasina (RN2), Toliara (RN7), Antsiranana (RN 6). Misy ihany ampahan-dalana ratsy amin’ireo rehetra ireo. Amin’ireo lalam-pirenena ireo ihany koa ny ahitana fiara betsaka mandeha alina. Mila tetibola betsaka ny fanaovan-dalana eto amintsika.